Cetilistat (282526-98-1) Ndị na-ere ngwaahịa na-ere ihe
CMOAPI nwere ngwa ngwa dị iche iche nke Cetilistat, ma nwee usoro njikwa njikwa njikwa niile, tinyekwara asambodo GMP na DMF.
Category: Ibu ibu ibu
Ceilistat powder Ozi ala
aha Ceilistat ntụ ntụ
Ụdị Gray Powder
Solubility na nsoluble na mmiri ma ọ bụ mmanya, soluble na Acetic acid, ethyl ester.
molekụla arọ 316.31 g / mol
molekụla Formula C25H39NO3
Ọnụọgụ ọgwụ 80-120mg
nchekwa temp Ụlọ okpomọkụ
Gịnị bụ ụlọ?
Cetilistat (CAS mba.282526-98-1) nke a makwaara dị ka ATL-962, ATL 962 ma ọ bụ Citilistat bụ ọgwụ egosiri maka ọgwụgwọ oke ibu. A na-eji ya na obere kalori, nri dị ala, na mmega ahụ kwesịrị ekwesị iji nyere aka na ọnwụ.
A na-ere ọgwụ ndị na-egbochi ọgwụ oke ibu n'okpuru aha dị iche iche gụnyere Ceislim, Kilfat, Oblean, na Checkwt.
Ceilistat bụ benzoxazine, eriri afọ lipase inhibitor nke na-arụ ọrụ kachasị site na igbochi mgbaze na absorption nke abụba ndị na-eri nri.
Kedu Ceilistat na-agwọ oke ibu?
Oké ibu bụ otu n'ime nsogbu ahụike ọha na eze kachasị n'ụwa taa. Ọ bụ ihe mgbagwoju anya, nke na-adịghị ala ala yana nsogbu na-akpata ọtụtụ ihe nke nchịkọta nke abụba / anụ ahụ na-egbu egbu.
A na - ejikọ oke ibu na nsogbu ahụike dịka ọrịa shuga nke ụdị 2, ọbara mgbali elu, hyperlipidemia, cholesterol dị elu, ụfọdụ ọrịa kansa, yana ụfọdụ ọrịa obi dịka ọrịa strok na ọrịa obi.
Oké ibu n'ọtụtụ mba eruwo oke ọrịa ma ya mere nchegbu ahụike zuru ụwa ọnụ.
Nnyocha na-egosi na ọnwụ dị arọ nke 5 ruo 10% nke ibu ahụ gị nwere ike belata oke nsogbu metụtara metabolic.
A na-ahụta Ceilistat dịka onye na-egbochi oke ibu. Ndị na-egbochi oke ibu na-eme ka mmefu ike na-abawanye ụba na-efu ọnwụ site na usoro nchịkwa na nke metabolic.
Cetilistat bụ eriri afọ pancreatic lipase inhibitor nke bụ ihe nchịkwa mgbochi oke ibu na ọmụmụ mmadụ.
Cetilistat na-arụ ọrụ site na igbochi mgbaze na absorption nke abụba n'ime nri ị na-eri. Mgbe abụba adịghị agbari ọ na-anyụpụ ya na nsị n'oge mmegharị afọ. Ọ na-eme nke a site na igbochi enzyme egbugbere ọnụ nke na-ahụ maka imebi triglycerides (abụba / abụba na ahụ) na eriri afọ.
The mmetụta cetilistat a na-egosi ya na akụkụ eriri afọ. Ya mere ọ pụtara na cetilistat dị iche na ndị ọzọ na-egbochi oke ibu na-emetụta ụbụrụ gị iji belata agụụ n'ihi na ọ na-arụ ọrụ n'akụkụ.
Mgbe a na-egbochi mgbaze na absorption nke abụba ndị na-eri nri, njedebe nke abụba na-ejedebe oke mmefu ume dị ala nke na-ebute ọnwụ.
Ọ bụ ezie na Cetilistat ga-enyere gị aka ịkwụsị ibu, ọ dị gị ka ịchekwa nri na-edozi ahụ nwere obere abụba yana mgbatị maka njikwa oke ibu.
Nkọwa VS Orlistat
Ma ụlọ ọgwụ ma ndepụta bụ ọgwụ ọgwụ eji eji agwọ oke ibu. Ha na-egosiputa ụdị ọrụ omume yiri nke ha na-esi na nhalata ibu.
Cetilistat na ndepụta aha bụ eriri afọ na-egbochi ihe na-egbochi ma ọ bụ belata mgbaze na absorption nke abụba ndị na-eri nri. Ihe egbugbere ọnụ bụ ihe kpatara mmebi nke triglycerides na eriri afọ. A na-ewepụ abụba ndị na-agbanweghi agbanwe site na ngagharị afọ na nsị mmadụ. Ọrụ a na-eme ka o doo anya na abụba ndị ahụ adịghị etinye n'ime ahụ na-eduga na ọnwụ ọnwụ.
Enweela mbelata dị ukwuu na ma ụlọ ma ndepụta. Ihe ịga nke ọma nke cetilistat na orlistat dabere na ụdị ndụ gị n'ihi na ha chọrọ ka ịrapara na obere kalori na-edozi ahụ yana mmega ahụ.
Ceilistat yana orlistat gosipụtara mmụba glycemic dị ka egosipụtara site na mbelata dị ukwuu na hemoglobin plasma glycosylated. Ha na-ebelata ihe ize ndụ nke nsogbu metụtara oke ibu dị ka ọrịa obi, ọbara mgbali elu, ọkwa cholesterol dị elu, na ụdị ọrịa shuga abụọ.
Mmetụta kachasị emetụta metụtara cetilistat na ndepụta aha bụ mmetụta nke eriri afọ na-abụkarị n'ihi abụba ndị na-agbanweghị agbanwe. Agbanyeghị, mgbe inwere cetilistat na ndị na-edebanye aha n'ihe metụtara nsonazụ, a na - ejikọkarị nsonaazụ ndị ọzọ na ndepụta aha karịa cetilistat. Na mgbakwunye, oke oke nke mmetụta a na-apụta karịa na ndepụta aha karịa cetilistat.
Mgbe ị na-atụle ndidi nke cetilistat na ndị na-edebanye aha, a kọọrọ na a ga-anabata cetilistat ka ọ dị mma karịa ndepụta.
A na-eduzi ọmụmụ ihe izu 12 metụtara ndị ọrịa buru oke ibu nke nwere ọrịa shuga nke 2 iji chọpụta nhalata ọnwụ, mbelata hemoglobin glycosylated, na ndidi nke cetilistat ma e jiri ya tụnyere ndepụta. Ejikọtara ọgwụgwọ ahụ yana obere obere abụba na nri shuga na-ejikwa metformin.
Nnyocha ahụ chọpụtara na ma ụlọ akwụkwọ ma ndị na-ede aha ha belatara nke ọma yana belata njikwa glycemic. Ọgwụ ndị ahụ belata ihe ize ndụ nke ọrịa obi site na mbenata gburugburu úkwù nke bụ ihe na-egosi ọrịa obi.
N'ime ọmụmụ ihe a, mmetụta ndị a hụrụ bụ mmetụta nke eriri afọ nke na-adịkarị na ndepụta, yana oke mmetụta nke nsonaazụ ndị a na-achọpụta dị elu karịa nke onye na-arịa ọrịa. Esemokwu dị iche iche nke cetilistat na ndepụta nwere ike ịdabere na esemokwu na kemịkal ha.
Nwepu ego site na ọmụmụ ihe ahụ bụ n'ihi mmetụta ndị ọzọ na-enwekarị aha na-edebanye aha karịa cetilistat. Ọzọkwa, a nabatara cetilistat karịa ndepụta.
Cannye nwere ike jiri Cetilistat?
Nwere ike ịtụle ịnara Cetilistat (282526-98-1) ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwụsị ibu. Agbanyeghị, dị ka ọgwụ ọ bụla ọzọ, kpachara anya mgbe ị na-a medicationụ ọgwụ a.
Akwadoro Cetilistat maka ndị nwere ahụ ike (BMI) nke dị elu karịa 27. Ọ dịkwa mma iburu cetilistat ma ọ bụrụ na BMI gị karịrị 27 na ị na-arịa ọnọdụ metụtara oke ibu dị ka ọrịa shuga na ọbara mgbali elu. BMI bụ akara nke abụba ahụ gbakọrọ site na ịkewaa ịdị arọ gị na kilogram site na square nke ịdị elu na mita.
Y’oburu n’ichoo iri cistilistat, gbaa mbo hu na i were usoro nri gi mee ihe ndia. A na-ejikarị usoro ọgwụgwọ cetilistat edepụtara na nri, n'oge ma ọ bụ ruo otu awa mgbe nri gị gasịrị.
Na ọgwụ cetilistat na-apụta na capsules ma ọ bụ mbadamba ụrọ maka nchịkwa ọnụ na iko mmiri. Nwekwara ike ịchọta ntụ ntụ nke cetilistat. A ga-ekpebi usoro ọgwụgwọ cetilistat ziri ezi na oge ọgwụgwọ gị site n'aka onye na-eweta ahụike gị dabere na ọnọdụ ahụ na nzaghachi mbụ na ọgwụ ahụ.
Ọnwụ ọnwụ nke Ceilistat abaghị uru maka ụmụaka, yabụ na ịgaghị enye ụmụaka ihe a. Nke a bụ ọkachasị ụmụaka ịnọ etolite etolite dịka cetilistat nwere ike imetụta uto ha karịa n'ịdị elu.
A na-ahụta Ceilistat dị ka enweghị nchedo maka ndị nne dị ime ma ọ bụ ụmụ nwanyị na-achọ ịtụrụ ime. O nwere ike ibutere nwa ebu n'afọ nsogbu nke ahụike.
A dụrụ ndị nne na-enye ara ara ndụmọdụ ka ha zere cetilistat n'ihi na ọ nwere ike ịgafere nwa ahụ.
Dọkịta gị nwere ike ịdụ gị ọdụ ka ị were ma ọ bụ zere cetilistat n'ihi ọnọdụ ahụike ndị ọzọ na-emetụta dịka ịmị ọkụ, cholestasis (ọrịa imeju), na ọrịa malabsorption na-adịghị ala ala.
A na-ahụta ntụ ọka Ceilistat dị ka ihe nchekwa mana ọ bụrụ na ị gafere usoro ọgwụgwọ cetilistat a tụrụ aro ma ọ bụ jụ ịgbaso ntuziaka ị nwere ụfọdụ mmetụta dị na teilistat. Mmetụta ndị a nwere ike ịmalite na mbido mana ọ dị nro ma kwesịrị ịla n'iji ọgwụ ọjọọ. Ọ bụrụ na ha apụọ, ị ga-akpọtụrụ dọkịta gị.
Cdị mmetụta cetilistat ndị a na-ahụkarị bụ;
Gas na nhapu
Ime ngwa ngwa na imegharị oge ọ bụla nwere ike isiri gị ike ịchịkwa
Mmanụ mmanu ma ọ bụ ọdụdụ abụba
Fọdụ mmetụta na-adịghị ahụkebe ma dị njọ karị nwere ike ime. Kwesịrị ịkpọtụrụ dọkịta gị ozugbo mgbe ị chọpụtara mmetụta ndị na-esonụ;
Jaundice (acha ọbara ọbara ma ọ bụ anya dum)
Ike ọgwụgwụ pụrụ iche
Nsogbu ilo ma ọ bụ iku ume.
Cetilistat ọnwụ ọnwụ na-abaghị uru na njikwa oke ibu bụ isi eji ya mara. Otú ọ dị, e nwere uru ndị ọzọ na-eme ka ọ dị iche ma pụta ìhè n'etiti ọgwụ ndị ọzọ na-efu ọnwụ.
N'okpuru bụ ụfọdụ uru cetilistat;
Nyere gị aka ịnọgide na-ebi ndụ dị mma site na ọnwụ ọnwụ
Cetilistat bụ otu n'ime ọgwụ ndị na-ebelata oke ibu yana onye na-egbochi oke ibu. N’ime ndụ gị dịkarịsịrị elu na-ebute oke ibu na abụba abụba a na-akpọkarị oke ibu ma ọ bụ ibu ibu. Ejikọtara ọnọdụ abụọ ahụ metụtara ahụike dịka ọrịa shuga nke ụdị 2, ọrịa obi dịka ọrịa strok, ọbara mgbali elu, na ụfọdụ ọrịa kansa dịka ọrịa cancer na ara.
Ihe dị iche n’etiti ndị buru oke ibu na oke ibu bụ arụrụ ahụ buru ibu (BMI). A na-ewere na mmadụ buru oke ibu mgbe BMI karịrị ma ọ bụ hara ka 25 ebe onye oke ibu nwere BMI karịrị ma ọ bụ hara nha 30.
Iwere cetilistat ga - enyere ahụ gị aka belata mkpokọta abụba wee si otú a na-enwe BMI ahụike yana na-ebi ndụ dị mma. Nke a bụ n'ihi na ọ na-ebelata ohere nke ọnọdụ egwu ndụ metụtara oke ibu.
Ọ na - enyere aka ịbelata ibu na mbelata hemoglobin glycosylated na ndị ọrịa na - arịa ọrịa shuga
Ọrịa shuga na ụdị ọrịa shuga a na-akpọkarị shuga mellitus bụ nsogbu nkịtị na ndị ọrịa buru oke ibu. Diabetesdị ọrịa shuga nke abụọ na-apụta mgbe mkpụrụ ndụ mmadụ na-eguzogide mmetụta kwesịrị ekwesị nke insulin, nke bụ itinye glucose ọbara n'ime sel. Nke a na - eduga n'ịchịkọta glucose n'ọbara. a maara oke ibu na-eme ka ọrịa shuga nke ụdị 2 na-arịwanye elu.
Glycosylated hemoglobin (haemoglobin nke glucose jikọtara) bụ usoro nke njikwa ọrịa shuga ogologo oge. Ogo nke hemoglobin glycosylated (HbA1c) na-egosi nkezi ọbara glucose n'ime ọnwa atọ gara aga. Leveldị hemoglobin dị na glycosylated nkịtị bụ 7% mana ọtụtụ ndị nwere ọrịa shuga nwere ike nweta 9% naanị.
N'ime izu 12, nke a na-ahụkarị, ọmụmụ ihe gbasara ahụike na njikwa ebebo, ndị ọrịa buru oke ibu nke nwere ọrịa shuga 2 nyere cetilistat (40, 80, ma ọ bụ 120mg ugboro atọ kwa ụbọchị). Ha ga-arapara na nri hypocaloric. Achọpụtara Ceilistat ka ọ belata oke ibu yana belata hemoglobin glycosylated (HbA1c). Achọpụtakwara na anabatala cetilistat nke ọma.
A nabatara Ceilistat nke ọma
Ewezuga ịdị irè ya na mbenata ibu na ijikwa oke ibu, enwere ya. Cetilistat na-anabata nke ọma na ahụ ya na mmetụta dị nro na nke na-adịchaghị mma nke na-edozi ya ma nwee ike ịla n'iyi na ojiji nke ụlọ.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime anyị na-aga maka ọgwụgwọ na ọgwụ, ọ dịkwa mma ịchọ ọgwụ ga-anabata n'ime ahụ gị.
Na usoro nke abụọ a na-eduzi ọmụmụ ihe maka izu iri na abụọ na-eji ma ndị na-ede akwụkwọ na ndị a na-edekarị. Achọpụtara ọgwụ abụọ na-efu ibu dị irè na mbenata ibu, na-ebelata hemoglobin glycosylated yana belata mgbatị n'úkwù. Ọzọkwa, achọpụtara cetilisat nke ọma karịa orlistat, na mmetụta dị ole na ole na obere mmetụta metụtara cetilistat.
Na-enyere gị aka iru ihe mgbaru ọsọ gị n'ime obere oge
Iwetulata ibu bụ ebumnuche dị mkpirikpi nke a ga-enweta site na ngbanwe nke nri yana yana mgbatị oge niile. Otú ọ dị, ịnọgide na-enwe ahụ ike dị mma bụ ihe mgbaru ọsọ na-adịte aka.
Dọkịta gị nwere ike ịkwado ọgwụ ị weightụ ọgwụ na-ebu ibu mgbe ndụ dị mma (nri na mmega ahụ) enwetaghị oke ọnwụ. Cetilistat bụ otu n'ime ọgwụ ndị enwere ike iji ya yana nri nwere abụba na mmega ahụ. N'adịghị ka ọgwụ ndị ọzọ na-egbochi ibu ibu na-ewe ogologo oge iji nweta oke ọnwụ, cetilistat na-ewe ihe dị ka izu iri na abụọ iji nye ihe achọrọ.
Nwere ike inye aka belata ọkwa kọlestrol gị
Cholesterol na-ezo aka waxy umi. Ahụ gị chọrọ ka ị wuo mkpụrụ ndụ n'agbanyeghị, nke ukwuu nwere ike ibute nsogbu n'ime ahụ.
A na-eme cholesterol site na imeju ebe ụfọdụ si na nri ị na-eri dịka anụ, anụ ọkụkọ, na ngwaahịa abụba zuru oke. Enwere 2 cholesterol. Obere cholesterol (LDL) cholesterol ma ọ bụ cholesterol "ọjọọ" na lipoprotein dị elu ma ọ bụ "ezigbo" cholesterol. LDL na - atụnye ụtụ na abụba na akwara akwara na - eme ka ohere nke ọrịa obi dị ka ọrịa strok na nkụchi obi.
Obbụ ibu buru oke ibu na - eme ka ihe ọghọm gị dị elu. Ibu na-eme ka ọnụ ọgụgụ LDL cholesterol dịkwuo elu site na ịgbanwe mmeghachi omume nke ahụ gị na abụba ndị ị na-eri. Mbufụt nke oke ibu na-ebelata mmeghachi omume nke ahụ gị na mgbanwe nke nri abụba na-eri nri. Na mgbakwunye, insulin na-eguzogide na-ahụkarị ndị ọrịa nwere oke ibu. Nke a na-emetụtakwa usoro abụba dị na ahụ gị.
Ceilistat nwere ike belata cholesterol zuru ezu yana LDL cholesterol.
N'ime ọmụmụ ihe metụtara oke, achọpụtara cetilistat nke ejiri ọnụ mee iji mee ka oke ibu na oke cholesterol dị.
Na-ebelata ihe ize ndụ nke ọrịa obi
Ọrịa Cardiovascular bụ okwu mkpokọta na-ezo aka na nsogbu ndị na-emetụta obi ma ọ bụ arịa ọbara. Ọrịa obi na-arịa ọrịa akwara obi dịka ọrịa obi na angina, ọrịa strok, nkụda obi, na ọrịa obi na-agba ume n'etiti ndị ọzọ.
Ihe kpatara ọrịa obi ji dị iche iche dabere na nsogbu ahụ. Dị ka ihe atụ, ọrịa akwara obi, ọrịa strok, na ọrịa akwara ozi na-akpata nwere ike ibute ọbara mgbali elu, ọrịa shuga nke abụọ, ị smokingụ sịga, enweghị mmega ahụ, oké ibu, na nri na-edozi ahụ. A na-eme atụmatụ ibu maka ihe dịka 2% nke ọrịa obi.
Ya mere, Cetilistat na-ebelata ihe ize ndụ nke ọrịa obi site na ịgwọ oke ibu ma na-agba ume nri siri ike nke na-arụ ọrụ na igbochi omume nke ọrịa obi.
N'ime izu iri na abụọ, ọmụmụ ihe abụọ kpuru ìsì metụtara ndị ọrịa buru oke ibu na-arịa ọrịa shuga, a na-enye cetilistat na 12, 40, ma ọ bụ 80 mg ugboro atọ kwa ụbọchị. A dụrụ ndị so na ya ọdụ ka ha na-eri nri nwere obere abụba n’oge oge ọmụmụ ihe ahụ.
Ọmụmụ ihe a kọrọ nnukwu mbelata dị mkpa yana njikwa glycemic ka mma. Na mgbakwunye, enwere mbelata dị ukwuu na gburugburu eriri nke otu n'ime ihe egwu dị na ọrịa obi.
Nwere ike belata ọbara mgbali gị
Ọbara mgbali elu nke ana-akpọ kwa dị ka ọbara mgbali elu bụ ọnọdụ nke ike ọbara imegidere akwara na-anọ elu ruo oge ụfọdụ. Ọbara mgbali elu dị egwu n’ihi na ọ na-amanye obi ịrụsi ọrụ ike na-eduga na mgbatị nke akwara.
A na - ejikọ ọbara mgbali elu na ụfọdụ ọrịa na - eyi ndụ egwu dịka ọrịa strok, akụrụ, na ọrịa imeju na ndị ọzọ.
I bu ibu gabiga ókè ma ọ bụ buo ibu na-eme ka o nwekwuo ohere ibute ọbara mgbali elu. Ọbara gị na-abawanye site na mmụba nke ibu.
Ya mere, ọ pụtara na ifelata bụ otu n’ime ụzọ isi belata ọbara mgbali gị. Nke a bụ ebe cetilistat na-abata n'ihi na ọ na-eduga na ọnwụ dị oke mkpa na obere oge.
Ebee ka m nwere ike zụta Cetilistat?
Y’oburu n’icho iji cetilistat zuta online na nkasi obi nke ulo gi. Ceilistat ntụ ntụ dị na ntanetị na ndị na-ere ahịa ma ọ bụ ndị na-emepụta ụlọ ụlọ ụlọ ahịa. CMOAPI bụ otu n'ime ndị na-ere ụlọ na-ere ngwaahịa dị mma yana ezigbo ndị ahịa.
Mgbe ịzụrụ cetilistat ntụ ntụ ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ, a na-enweta capsules cetilistat CMOAPI ma ọ bụ ndị ọzọ na-ere ahịa ụlọ, jiri nlezianya nyochaa aha mmado maka iji ọgwụ ọjọọ eme ihe. Tụlee usoro onunu ogwu a tụrụ aro ka onye na-eme ụlọ ahụ nyere ndụmọdụ mana sorokwa ndị na-ahụ maka ahụike gị.
Reading nyocha ụlọ site na ahụmịhe nke onwe gị nwere ike inyere gị aka ịghọta nke ọma nrụpụta ọrụ ya yana nchekwa. Imirikiti ndị ahịa nke cetilistat na-azụta ntanetị ma nwee ike ịhapụ nyocha ụlọ na-adabere na ahụmịhe nke onwe ha.
Ọnụahịa ụlọ bụkwa ihe ịtụle mgbe ịchọrọ ịzụ ya. CMOAPI bụ otu n'ime ndị na-ebunye ndị ụlọ akwụkwọ nwere ike ịnye ọnụahịa ụlọ ụlọ. Agbanyeghị, ọnụahịa cetilistat ekwesịghị ikpuchi gị ịhọrọ ngwaahịa adịghị mma.
Zụta ihe sitere na nkasi obi nke ụlọ gị nwere ike ịbụ ọnwụnwa ịzụta ngwa ngwa, agbanyeghị, ị ka kwesịrị ime ndokwa kwesịrị ekwesị iji mata nnweta ọgwụ ndị ịchọrọ tupu oge eruo.
Bryson, A., de la Motte, S., na Dunk, C. (2009). Mbelata nke nri abụba na-eri nri site na akwụkwọ akụkọ gastrointestinal lipase cetilistat na ndị ọrụ afọ ofufo ahụike. Akwụkwọ akụkọ British nke gbasara ọgwụ ọgwụ, 67(3), 309–315. https://doi.org/10.1111/j.1365-2125.2008.03311.x.
Hainer V. (2014). Isi nke ọgwụ antiobesity ọhụrụ. Echiche ndị ọkachamara na ọgwụ pharmacotherapy, 15(14), 1975–1978. https://doi.org/10.1517/14656566.2014.946904.
Kopelman, P., Groot, G., Rissanen, A., Rossner, S., Toubro, S., Palmer, R., Hallam, R., Bryson, A., & Hickling, RI (2010). Ọnwụ ọnwụ, Mbelata HbA1c, na ndidi nke cetilistat na usoro 2 nke a na-achịkwa ebe a na-achịkwa ebe a na-arịa ọrịa mamịrị buru ibu: nyocha na ndepụta (Xenical). Ibu (Silver Spring, Md.), 18(1), 108–115. https://doi.org/10.1038/oby.2009.155.
Kopelman, P; Bryson, A; Nwagbara, R; Rissanen, A; Rossner, S; Toubro, S; Valensi, P (2007). "Cetilistat (ATL-962), onye na-emechi ihe na-emechi egbugbere ọnụ: Otu izu nke 12, usoro ọmụmụ a na-achịkwa ebebo banyere mbelata ibu na ndị ọrịa buru ibu". International Journal of Ibu. 31 (3): 494–9. ma ọ bụ: 10.1038 / sj.ijo.0803446. PMID 16953261.
Adkwụ, R (2008). "Cetilistat, ihe mgbochi lipase ọhụrụ maka ọgwụgwọ oke ibu". Mkpebi Ugbu a na Ọgwụ Nyocha. 9 (4): 414– PMID 18393108.
Yamada Y, Kato T, Ogino H, Ashina S, Kato K (2008). "Cetilistat (ATL-962), akwụkwọ akụkọ pancreatic lipase inhibitor, na-eme ka uru ahụ dị elu ma na-emezi profaịlụ lipid na oke". Nchọpụta Hormone na Metabolic. 40 (8): 539– iche: 10.1055 / s-2008-1076699. PMID 18500680. S2CID 29076657.